हामी आफैं साइबर अपराधी वा शिकार त भएका छैनौं ? - NepalDut NepalDut
हामी आफैं साइबर अपराधी वा शिकार त भएका छैनौं ?
यस्ता धेरै सजिला पक्षसँगै साइबर अपराध र जंक फुडको लत पनि बढेको छ । यसबारे सचेत बनाउन परिवार र समुदाय तहमै प्रयासहरु समेत थालिएका छन् । धारापानी आमा समूह पोखरा ५ ले शनिबार जंकफुडरहित खाना तथा इन्टरनेटको दुरुपयोगका जोखिमबारे समूहका सदस्य र बालबालिकालाई प्रशिक्षण दिएको छ ।